diyaarad - Geofumadas
Barnaamijka AEC ee xiga iyo barnaamijka SPAR 3D 2019 ee la soo bandhigay
100-ka qof ee ka hadlaya shirka ayaa la shaaciyay, oo ay ku jiraan bandhigyo cusub oo ka socda National Geographic iyo IBM. Maarso 28, 2019 (Anaheim, Kaliforniya, USA) - Abaabulayaasha AEC Next Technology Expo + Shirka iyo SPAR 3D Expo & Shirka, munaasabadaha wadaagga ah ee teknolojiyad wadaagga ah ee…
Bishii Abriil 3 iyo 4 ee sanadkaan 2019, Fairoftechnology - shirkad Isbaanish ah, oo fadhigeedu yahay Malaga, waxay abaabushaa dhammaan noocyada dhacdooyinka la xiriira tikniyoolajiyadda - waxay ku martiqaadeysaa dhammaan asxaabta ka shaqeyneysa geoengineering inay ka qeyb galaan dhacdo weyn, halkaas oo waxay soo bandhigi doonaan tabo cusub sannadihii la soo dhaafay. Fairoftechnology, waxay leedahay ...
Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, tabo cusub
Jiilka khariidad adeegsanaysa farsamadan ayaa noqon kara dhibaato weyn, mid ka mid ah dhibaatooyinkaas ayaa ah mid aad muhiim u ah cawaaqibka luminta bilooyin qiimo leh oo shaqo waxtar leh leh marka aadan khibrad hore ugu lahayn howshan. Aasaasayaasha Nidaamka Khariidaynta Aerotas waxay nagala hadlayaan maqaal POB ah ...
Muuqaalka guud ee dhaqanka vrs. LiDAR. Saxnimada, waqtiga iyo kharashka.
Shaqo la qabashada LiDAR miyey ka saxnaan kartaa marka loo eego sahaminta caadiga ah? Haddii aad yareyso waqtiga, immisa boqolkiiba? Intee ayey yareyneysaa kharashyada? Waqtiyada waa hubaal inay isbadaleen. Waxaan xasuustaa markii Felipe, oo ah sahamiyaha hawsha ka qabtay goobta, uu la yimid buug yar oo ka kooban 25 bog oo qaybo iskutallaab ah si loo abuuro ...
Featured, Engineering, egeomates My, topografia
Samee Diyaarad Drone ah, Mashruuca Sayniska Wiilkayga
Uma muuqato in kani yahay isla abuurkii iga yaabiyey dhawr sano ka hor qaboojiyaha gaaska ee methane-ka. Uguyaraan waxay ku tusaysaa timaha cirro leh iyo isbedelka su'aalahiisa: Halkii uu weydiisan lahaa ciyaar cusub oo moobiil ah, wuxuu i waydiistay ruqsad ...